शयनकक्ष पोशाक गर्न युवा मूल हेडबोर्ड सजाउनुहोस्
मारिया vazquez | | शयनकक्षहरू
हेडबोर्डहरू एक हुन् बेडरूममा धेरै महत्त्वपूर्ण तत्व। तिनीहरू ओछ्यानमा ध्यान आकर्षित गर्छन् र मुख्य पर्खाल सौन्दर्यतापूर्वक धेरै आकर्षक बनाउँछन्। आजकल, यसको अतिरिक्त, त्यहाँ सामग्रीको एक धेरै विविधता छ जुन आज हामी प्रस्ताव गर्छौं जस्तो मौलिक र युवा हेडबोर्डहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ।
सब भन्दा परम्परागत हेडबोर्डहरूको बारेमा हामीले धेरै अवसरहरूमा बोलेका छौं: काठ, आकारको वा असबाबित हेडबोर्डहरू। यस पटक, तथापि, हामी मूल विकल्पहरूमा शर्त लगाउँछौं युवा बेडरूम सजावट को लागी उत्तम। तपाईं तिनीहरू मध्ये धेरै जना आफ्नै हातले सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, यसैले तिनीहरूलाई व्यक्तिगत परियोजना बनाउनुहोस्। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
Al युवा शयनकक्ष को सजावट यसको मालिकको व्यक्तित्वलाई ध्यानमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सँधै हो, तर यो त्यो अवस्था हो जब हाम्रो व्यक्तित्वको प्रदर्शन एक आवश्यकता बन्छ। त्यसकारण हामी तपाईलाई बिभिन्न बिचारहरु देखाउन चाहान्छौं, ता कि सबैले तपाईको शैलीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकून्।
1 पेन्टेड हेडबोर्ड
2 छिद्रित प्यानल हेडबोर्डहरू
3 पुनर्चक्रित काठ हेडबोर्डहरू
4 रट्टन हेडबोर्ड
5 कपडा फाइबर र डोरीहरूको साथ DIY हेडबोर्ड
चित्रकारीले हामीलाई सृजनात्मक हुन आमन्त्रित गर्दछ, तर यसबाट शयन कक्ष जस्ता ठाउँहरू रूपान्तरण हुन आवश्यक छैन। रचनात्मकताको अभावमा, हामीले के गर्नुपर्दछ पिनटेरेस्ट जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रेरणा लिनुहोस् र त्यसोभए हामीलाई सबैभन्दा धेरै मन पराइएको विचार पुनः सिर्जना गर्नुहोस्।
पेन्टेड हेडबोर्डहरू आज एक प्रवृत्ति हो। प्रतिलिपि गर्न सजिलो, मूल र सस्तो प्रवृत्ति। किनकि हेडबोर्डको रूपमा सेवा गर्ने भित्तेमा ज्यामितीय मोटिफहरू सिर्जना गर्न, हामी केवल एक वा धेरै र in्गमा रंग्न र रंग्न चाहेको क्षेत्र सीमांकन गर्न मद्दत गर्न केवल चिपकने टेप चाहिन्छ।
गोलाकार आकारहरू सबै भन्दा लोकप्रिय छन्, हाल, युवा मूल हेडबोर्डहरू सिर्जना गर्न, जसको मतलब यो होइन कि तपाईंले वर्ग आकारहरू बेवास्ता गर्नुपर्दछ यदि यिनीहरू तपाईंलाई मनपर्दछ भने। दुबैको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि उनीहरूले तपाईलाई कोठामा उपयोगी ठाँउ लुट्ने छैनन्।
छिद्रित प्यानल हेडबोर्डहरू
छिद्रित प्यानलले हालका वर्षहरूमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। डेकुरामा हामी अचम्म मान्दैनौं, ती हुन् धेरै सजिलो स्थापना गर्न र धेरै व्यावहारिक कुनै कोठा संगठित गर्न। शयनकक्ष कुनै अपवाद छैन र यो युवा बेडरूमहरूमा जहाँ तिनीहरू उत्तम फिट हुन्छन्।
छिद्रित प्यानलहरूले बनेको हेडबोर्ड बिस्तरको वरिपरि हामीलाई फरक तत्वहरू सामेल गर्न अनुमति दिन्छ। एक शेल्फ, उदाहरण को लागी, त्यो एक बेडसाइड तालिका को रूप मा कार्य गर्दछ र कोठामा अर्को अतिरिक्त तत्व थप्नु हुँदैन। हामी केही टोकरीहरू मिलाउन टोकरी पनि राख्न सक्छौं र रातमा पढ्नको लागि प्यानेलमा बत्ती बाल्न सक्दछौं। थप रूपमा, यी प्यानेलहरू पेंट, डोरी वा रंगीन ऊन मार्फत निजीकृत गर्न धेरै सजीलो हुन्छ।
पुनर्चक्रित काठ हेडबोर्डहरू
रिसाइक्ल्ड काठ हेडबोर्डहरू युवा ठाउँहरू सजाउनको लागि एक उत्तम विकल्प हो। ती संग हेरिंगबोन बान्की तिनीहरू ती हुन् जुन आज सबैभन्दा लोकप्रिय छन्, तर विकल्प मात्र छैन। अन्तिम छविमा जस्तै रेखीय बान्कीहरूले हामीलाई डेकोरामा प्रेममा पारेको छ।
दुबै बान्कीहरूले कोठालाई प्राकृतिकता र न्यानोपन दाउराको लागि यति अनौंठ दिन्छ, तर ताजापन र पुन: साइकल पट्टिको चरित्रको साथ। यदि तपाईंलाई हेडबोर्डको यो शैली मनपर्दछ भने, तपाईंलाई यो जान्न पनि मनपर्नेछ कि तपाईं आफैले सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फ्रेम सिर्जना गर्दै र यसमा संयोजन गर्दै विभिन्न शेडमा फल्याकहरू प्राकृतिक वा नरम रंगमा चित्रित।
रट्टन हेडबोर्ड्स आफ्नै मा मौलिक छैन, तर तिनीहरू हुन सक्छन् यदि तिनीहरूले आकार वा वर्णको साथ रंग अपनाए। केमा श is्का छैन जुन उनीहरूको मौलिकतालाई ध्यान दिएर तिनीहरू हुन् परम्परागत कला टुक्रा र ती जस्तो कि तिनीहरू शयनकक्षमा व्यक्तित्वको एक धेरै ल्याउँछन्।
छविहरूमा देखाइएको जस्तो आकारहरूसँग, तिनीहरू खोज्ने व्यक्तिको शयनकक्षहरू सजावटका लागि उपयुक्त छन् प्राकृतिक र बोहेमियन स्पर्श। सब भन्दा विस्तृत टुक्रा लाई महत्त्वपूर्ण लगानीको आवश्यकता पर्दछ, यद्यपि प्रतिस्पर्धी र पहुँचयोग्य मूल्यहरूमा हस्तकला टुक्राहरू फेला पार्न सम्भव छ उनीहरूको लोकप्रियताको लागि धन्यवाद।
कपडा फाइबर र डोरीहरूको साथ DIY हेडबोर्ड
हामी ती युवा युवा हेडबोर्डहरूमा फोकस गर्न फर्किन्छौं जुन तपाईं आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ। यस अवस्थामा, प्रयोग गर्दै ब्रेडेड कपड़ा डोरी वा फाइबर कच्चा मालको रूपमा। के तपाईंले छविहरूमा एक नजर राख्नुभयो? तपाईं वेबमा साधारण ट्यूटोरियलहरू अनुसरण गरेर हरेक र हरेक सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ भनेर जान्न तपाईं चकित हुनुहुनेछ।
तिनीहरूलाई बनाउनको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्नेछ, पहिले नै उल्लेख गरिएका तत्वहरू साथै एक समर्थन। सामान्य कुरा, यसको सरलताको कारण, हो काठको स्ट्यान्ड प्रयोग गर्नुहोस् कि पछि ड्रिलको साथ तपाईं यसलाई भित्तामा ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा तपाईले आफ्नो रचनात्मकता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डोरीको वेब, छालाको वेणी पट्टि वा बुन्नको रूपमा यदि यो तानो हो। कुन तीन विचारहरू तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्छ?
के तपाईंलाई मूल विचार हेडबोर्डहरूको साथ शयनकक्ष सजाउनका लागि हाम्रो विचारहरू मनपर्‍यो? धेरै सजावट स्टोरहरुमा पाउन सकिन्छ; अन्य, तथापि, तपाईंले सिर्जना गर्नुपर्नेछ वा तिनीहरूलाई बनाउनु पर्छ। दुबै चरित्र र व्यक्तित्व बेडरूममा ल्याउँदछ र मुख्य भित्तामा ध्यान आकर्षित गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » शयनकक्षहरू » शयनकक्ष पोशाक गर्न युवा मूल हेडबोर्ड
बाथरूममा शौचालय सफा कसरी गर्ने